Izinqolobane Zokuzithuthukisa Komuntu - U-Edwin Van Der Hoeven
I-Bitcoin nengokomoya lokuhweba
U-Edwin unginikeze ukuzethemba okwengeziwe futhi ngibonile ukuthi imizwa yami ilungile futhi ingazwakala.
Ukukhathazeka kwami ​​sekuphelile futhi ukuzethemba kwami ​​kubuyile. Okuhlangenwe nakho okuhle komuntu siqu. Ngiyabonga kakhulu ngalokhu, Edwin!
Uphethe ukhiye wenkululeko
Wonke umuntu unedrowa elingabonakali kwenye indawo lapho sifihla khona ukwesaba kwethu. Kwesinye isikhathi ivaliwe isikhathi eside kangangoba asazi nokuthi kungani. Kulungile? mmmm hhayi impela, ngoba uma ikuthinta ungazi, ingakuthumela ngendlela ongafuni ukuya kuyo nhlobo. Ngabe kwesinye isikhathi uyacabanga ngemuva kwalokho; kungani ngisho noma ngikwenza lokho? Ukuze! Isikhathi silungile sokuzikhulula.
Ngubani onamandla; umzimba wakho noma ingqondo yakho?
Ukudla okunempilo kukunika amandla adingwa ngumzimba wakho. Ukulala kungokwalolo hlu. Kepha uma sikhuluma ngesimo sethu ngokomzwelo nangokwengqondo ukuthula kuthula ngokushesha… ukuqeqesha kanjani lokho futhi ungasho nini ukuthi udinga ukuqeqeshwa?
Njengoba nje ungahlala uphambane nophahla ngokuphakamisa izinsimbi, ngakho-ke ungaphanjaniswa yimicabango yakho bese uzincishe. Ufuna ukufeza okuthile kepha akusebenzi nje. Umbono wokuthi unomngane ongasiza lapho kunesidingo uvame ukwanele. Ungenza okungaphezu kwalokho ocabanga ukuthi kunakho!
Izindatshana zakamuva kakhulu Zokuthuthuka Komuntu Siqu
I-27 september, 2020
Ukupha kufanele kugeleze ngezikhathi zobunzima
I-3 ngoFebhuwari, 2020
Wake wacabanga ukuthi kungani uhlala?
I-6 Disemba, 2019
Ezamabhizinisi ukusebenzisana phakathi kokucabanga nokuzizwa
Ukuthuthuka komuntu siqu kubalulekile uma wena njengosomabhizinisi ufuna ukwenza izinqumo ezakhayo nezintsha. Ukufuna ukuthuthuka akusho ukubambeka esikhathini esedlule. Kodwa-ke, ukucabanga kwazi into eyodwa kuphela; okwenzekile esikhathini esedlule. Lokhu kuyenza ikwazi ukwenza izinhlelo nokuhlela izimo. Kepha uthini umuzwa wakho, ingabe ulokotha ukwethemba umuzwa wakho ngokwengeziwe bese umane uthathe ukweqa kokholo?
Ingabe ukuqondiswa komuntu siqu kuyinto yakho?
Impilo kwesinye isikhathi ikunikeza izinselelo ezinkulu kakhulu; emsebenzini, ebuhlotsheni bakho, emndenini wakho noma 'injongo' yakho siqu. Yabelana ngemininingwane yakho futhi ngizoxhumana nawe ngokushesha ukuze ngibone ukuthi ngingakusiza kanjani.
I-27 september, 2020	Akunazimpendulo
Izindaba ezingokomoya nezezezimali kwesinye isikhathi zibonakala ziphikisana. Kule vidiyo yokuqala ngichaza ukuthi ungafunda okuningi ngawe uma uhweba ngamasheya noma ama-cryptos. Kukufundisa ngokubekezela, ukugxila, ukwesaba, isu kanye nezinye izimfanelo eziningi ezingakusiza kakhulu empilweni.
29 April, 2020	Akunazimpendulo
Imali ifana namanzi futhi kufanele igeleze ngokukhululeka. Umuntu uyisiteshi esiphakathi kuphela kule mpahla eqhubekayo. Ngakho-ke, hlakulela ukupha ukuze uvumele imvelo yenze umsebenzi wayo.
I-3 ngoFebhuwari, 2020	Akunazimpendulo
Isibonakaliso sakho se-zodiac sisho okuthile ngethonya lamandla lapho uzalwa. Isiginali yakho ye-zodiac isebenza njengendawo yokuqala! Kule blog ngifuna ukuchaza ukuthi lezi zinkanyezi zingaba nomthelela kanjani kuwe njengomuntu.
I-6 Disemba, 2019	Akunazimpendulo
Abantu abaningi bayakwesaba ukufa futhi ngenxa yalokho bavame ukusaba impilo uqobo. Bayeka impilo idlule, izimpumputhe, ngethemba lokuthi kuzokwenzeka isimangaliso ngelinye ilanga. Ukuthi konke kuba ngcono. Kepha kanjani? Ababoni ukuthi bona ngokwabo bangabaklami bezimpilo zabo.
Ugcine nini ukuzithola?
Novemba 26, 2019	Impendulo ye-1
Ukuthuthuka ngokomoya kumayelana nesithombe esikhulu nokuzazi ngokwakho akushiyi ukukhetha! Uzihlangabeza ngakho-ke akulula ngaso sonke isikhathi noma kumnandi ngoba uhlangabezana nezingxenye zakho, kuwe uqobo, ezingabhekana nazo impela.
Novemba 15, 2019	Akunazimpendulo
Konke ukuqeqeshwa, i-workshop noma inkambo oyenzayo ifana nolunye ucezu lwephazili. Ufunda okuthile futhi, ubhekene nokuthile ongafuni ukukubona futhi ungaphinda ukhule kancane. Isiqondisi sami ngakho-ke akuyona indawo yokugcina, kufana nokuthola esinye isiqeshana sephazili sempilo.
Ukunyakaza kuvela esiteji
I-25 Okthoba, 2019	Akunazimpendulo
Thembeka kuwe uqobo, enhliziyweni yakho nasezifisweni zayo ezijulile. Yiba yilokho oyikho ngempela futhi uyeke ukukhohlisa okungeke kukusize ngalutho. Kumele ube njalo.
Lapho ungabaza ungabambeki
I-27 september, 2019	Akunazimpendulo
Kuthathani ukunqoba ukungabaza? Ukubheka futhi ukuthi yini engakunika ukuphepha. Ukuvala amehlo akho emhlabeni wakho wangaphandle bese ungena. Nguwe kuphela ongakunikeza isiqiniseko empilweni.
Vuka ngemuva kokuwa uqhubeke nokuhamba
I-8 september, 2019	Akunazimpendulo
Ukuvumela isikhathi esidlule konke okufanele ukwenze. Ungabe usazama ukubambelela kulokho ongasakukhonzeli. Uthuli olungemuva kwakho luzokwehla luze lulinde ukuphakanyiswa futhi ngumuntu olandelayo olandelayo Akukho okuhlala kufana, kothile, kungani kufanele kube okuhlukile kuwe. Ngakho-ke, sukuma futhi uqhubeke, uqhubeke nempilo yakho futhi ungaqhubeka nokudabukisa. Vumela uzizwe udabukile, kepha futhi ubone impumuzo njengesikhashana sokuqhubekela phambili.
Nqoba ukwesaba kwakho!
I-7 ngoMeyi, 2019	Akunazimpendulo
Nqoba ukwesaba kwakho kanye namagugu amahle akulindelwe. Ngokuvamile kuyindaba yokubekezela. Ukwesaba ozizwa ungekho lapho uya khona ekugcineni!
Yini ngempela ejabulisa wena?
I-22 Okthoba, 2013	Akunazimpendulo
Uyazithanda? Yini ekujabulisayo? Ngakho-ke kaningi sinika amandla ethu, amandla ethu okubumba izimpilo zethu ngokwethu. Ungazibuza; yini ekujabulisayo?
Ukuphulukiswa ngokomoya 20 € / 25min.
Zizwa umphumela okhanyisayo wokuphulukiswa ngokomoya. Ukwelashwa kuthatha cishe imizuzu engama-25 lapho ngingena khona emhlabeni kamoya ukuze ngidlulise ukuphulukiswa.
Ukuqeqeshwa komuntu siqu 85 € / 90min.
Ngabe uhlangabezana nokuthile emsebenzini, unenkinga yokukhuluma ngemizwa yakho noma ufuna ukwesekwa okuthile ngentuthuko yakho yangasese noma engokomoya? Ngikufaka isibuko, ngikukhiphe endaweni yakho yokunethezeka lapho kudingeka khona futhi ngikusize ukuba uzibheke ngendlela enhle neyakhayo.